India in Zimbabwe 2013 | News
Jul 23, 2013, 18:31 PM IST
Ravindra Jadeya plays a shot on during the last day of a series of one day international cricket matches between India and Zimbabwe at the Queens Sports Club in Bulawayo, Zimbabwe.
Ravindra Jadeya plays a shot on the last day of the one day international cricket match between India and Zimbabwe at Queens Sports Club in Bulawayo, Zimbabwe.
Zimbabwean batsman Brendan Taylor walks off the pitch after been dismissed for a duck during the last day of the one day international cricket game against India at Queens Sports Club in Bulawayo, Zimbabwe.
Zimbabwean batsman Timycen Maruma avoids a run out during the last day of the one day international cricket match against India at Queens Sports Club in Bulawayo, Zimbabwe.
Indian batsman Rohit Sharma, centre and Suresh Raina, right, react with teammates after beating Zimbabwe by 9 wickets during their fourth, one day international match, at Queens Sports Club, in Bulawayo, Zimbabwe.
Zimbabwean batsman Malcom Waller, avoids the ball during the fourth, one day international match against Inida, at Queens Sports Club, in Bulawayo.
Virati Kohli, left and Suresh Raina walk off the pitch after beating Zimbabwe by 7 wickets during their third one-day international cricket match, in Harare.
Suresh Raina, right and Zimbabwean bowler Brian Vitori chat during their third one-day international cricket match, in Harare
Dinesh Karthik, seen on the pitch during the third one-day international cricket match against Zimbabwe, in Harare.
Zimbabwean batsman Sean Williams left, plays a shot as Indian wicketkeeper Dinesh Karthik looks on, during their third one-day international cricket match in Harare.
Jaidev Unadkat bowls on the third day of the cricket match against Zimbabwe in Harare.
Virat Kohli, second from right, is given a signal to get out after he was caught for 14 runs on the second day of the one day international cricket match against Zimbabwe, in Harare.
Rohit Sharma walks off the pitch after been dismissed for one run as Zimbabwean players celebrate his wicket on the second day of the one day international against India in Harare.
Zimbabwe's Sikanda Raza Butt plays a shot during the one day international cricket match against India in Harare.
Indian players celebrate the wicket of Zimbabwe's Sean Williams during the one day international in Harare.
Zimbabwean batsman Sean Williams plays a shot while Indian wicketkeeper Dinesh Karthik looks on, during the one day international cricket match against India in Harare.
Indian bowler Jaiden Vnadkhat makes an unsuccessful appeal for the wicket of Zimbabwe's Vusimusi Sibanda during the one day match in Harare.
Suresh Raina during a practice session in Harare.
Indian Cricket players are seen during a practice session in Harare.
Indian Cricket players, during a practice session in Harare, Zimbabwe.
Ashes 2013: Australia in England